DR Congo - BBC News Somali
Dadka Jamhuuriyada Dimoqaraadiga ee Congo ugu dhintay Ebola oo Gaadhay 1,000
Tirada dhimashada ee uu sababay cudurrada Ebola ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa gaadhay 1,000, sida ay sheegtay wasaarada caafimaadka.
Mareykanka oo si daahsoon u muujiyay in doorashadii Congo lagu shubtay
Mareykanka ayaa ku eedeeyay dhowr saraakiil sarsare oo ku sugan Jamhuuriyadda Dimuqraaddiga ah ee Congo inay ku lug leeyihiin musquqmaasuq la xiriira doorashadii madaxtinnimada ee lagu murmay ee dhowaan dalkaasi ka dhacday.
Wasiirrada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo oo heli doona mushaarkii noloshooda
Xukuumadda xilka sii banaynaysa ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo ayaa waxa ay difaacday go'aanka ay wasiirradii hore ugu ballan qaadday inay heli doonaan mushaarkoodii inta ay nool yihiin iyo weliba dhaqaale kale.
Felix Tshisekedi oo maanta loo dhaarinayo xilka madaxwaynaha Congo
Felix Tshisekedi oo guddiga doorasaha Congo ay shegeen in uu ku guulaystay doorashadii dalkaasi ka dhacday ayaa maanta lagu wadaa in xilka madaxwaynanimada loo dhaariyo.
Doorashada Congo: Madaxweynayaal Afrikaan ah oo durba hambalyo diray
Labo madaxweyne oo Afrikaan ah ayaa ugu hambalyeeyay hoggaamiyaha mucaaradka Jamhuuriyadda Dimuqraaddiga ah ee Congo Felix Tshisekedi guushii uu ka gaaray doorashadii madaxtinnimo ee dalkaasi ka dhacday, inkastoo Midowga Afrika uu sheegay inuu "shaki weyn ka qabo" natiijada.
20 Jannaayo 2019
12 Jannaayo 2019
Iyada oo ay isa soo tarayaan baaqyada lagu doonayo in lagu shaaciyo natiijada doorashadii madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Koongo ka dhacday, ayaa saraakiishu sheegeen in aan [maanta oo] Axad ah lagu dhawaaqayn.
5 Jannaayo 2019
Dadka dalka labaad ee ugu wayn Afrika oo maanta doorasho u dareeray
Goobaha codbixinta ayaa la furay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo ah dalka labaad ee ugu wayn qaaradda Afrika.
Dibedbaxayaasha ku sugan magaalooyinka Goma iyo Beni ayay booliska ku kala eryeen suntan dadka ka ilmeeysa kadib marki dibedbaxaal careeysan ay weerar ku qaadeen xarun caafimaad oo lagu daaweeynayay dadka qaba cudurka Ebola.
Booliiska Congo iyo taageerayaasha mucaaradka oo isku dhacay
Booliiska Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Koongo ayaa sunta dadka kaga ilmaysiisa waxa uu ku kala kaxeeyay taageerayaasha mucaaradka ee dhagxaanta tuurayay, xilli lagu wado in dalkaasi ay doorasho ka dhacdo maalinta Axadda ah ee soo socota.
Joseph Kabila: Kama bixi doono siyaasadda Congo doorashada kadib
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Dimuquraadiga ah ee Congo Joseph Kabila ayaa sheegay in uu xafiiska isaga tagi doono wixii ka dambeeya doorashada dalkaasi ka dhacaysa 23-ka December, balse laga yaabo in dib isusoo sharraxo mustaqbalka.
9 Disembar 2018
Ilaa hadda inta la ogyahay tirada dadka u dhintay cudurka Ebola ee ka dillaacay bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo waxay gaarayaan 200 qof. Sida ay sheegayaan saraakiisha caafimaadka.
Congo: Tobonaan dad ah oo ku dhintay shil gaadhi
Ugu yaraan 50 qof ayaa ku dhintay kadib markii gaari wayn oo nooca shidaalka qaada ah uu ku dhacay gaari kale oo marayey waddo wayn oo marta galbeed Jamhuuriyadda dimuquraadiga ah ee Congo.
Maxkamadda Dastuuriga ee dalka Congo ayaa Bemba ka mamnuucday inuu musharrax madaxweynanimo iisu soo taago.
Wasiirka caafimaadka ee dalka Jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo waxaa uu sheegay in labo kamid ah tobanka qof ee la siiyay daawooyin tijaaba oo loogu talo galay cudurka Ebola ay ku caafimaaden.
Jean-Pierre Bemba oo loo diiday inuu u tartamo doorashada madaxtinimo
Guddiga doorashada dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa diiday inay aqbalaan codsi uu u gudbiyay hoggaamiyaha mucaaradka dalkaasi Jean-Pierre Bemba oo uu ku doonayay inuu ka qayb noqdo musharraxiinta madaxtinimo ee ka qayb galaya doorashada bisha Disembar dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ka dhacaysa.
Congo: Tirada dadka uu haleelay Ebola oo sare u kacday
Xukuumadda jamhuuryada dimuqraadiga ee Congo ayaa sheegtay in ay sare u kacday tirada dadka uu haleelay cudurka Ebola bariga dalkaasi.
Wasaarada cafimaadka ee dalka Jamhuuriyada dmuqraadiga ee Congo ayaa sheegtay in dalakasi laga bilaabi doono talaalka cudurka Ebola.
Kiisas horleh oo xanuunka Ebola ah oo laga helay dalka Congo
Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa bilaawday inay shaqaale iyo agab caafimaad geeyso dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo oo laga soo sheegay kiisas horleh oo cudurka Ebola